क्षेत्रप्रताप अधिकारीको दुई बालकविता सङ्ग्रह प्रकाशित | Ketaketi Online
Home » क्षेत्रप्रताप अधिकारीको दुई बालकविता सङ्ग्रह...
क्षेत्रप्रताप अधिकारीको दुई बालकविता सङ्ग्रह प्रकाशित
posted by ketaketionline on Tue, 05/28/2019 - 22:49
गामबेँसीका कवि भनेर चिनिने कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीका सरल र मार्मिक बालकविताहरुको दुईवटा सङ्ग्रह बुकआर्ट नेपालबाट प्रकाशित भएको छ । ‘नानी, बाबु र अरु कविताहरु’ र ‘पासाङल्हामु शेर्पा र अरु कविताहरु’ नामक यी दुई कृतिमध्ये नानी, बाबुमा १५ कविता र पासाङल्हामुमा १३ कविता समावेश रहेका छन् । सरल शब्दमा बालबालिकाले बुझ्न सजिलो हुने गरी रचना गरिएका दुवै सङ्ग्रहका कविताहरु उत्कृष्ट छन् ।
नमूनाका लागि यी दुई कविता हेरौँः
देश भनेको कस्तो हुन्छ ?
हाम्री आमाजस्तो हुन्छ ।
देशको माया कस्तो हुन्छ ?
दूधजस्तै मीठो हुन्छ ।
देशलाई के के गर्नुपर्छ ?
धेरै माया गर्नुपर्छ ।
२. नयाँ नेपाल
नानीहरु कस्ता हुन्छन् ?
बुद्घजस्तै ज्ञानी हुन्छन् ।
ज्ञानी भए के के हुन्छ ?
राम्रो सबै हाम्रो हुन्छ ।
राम्रो भन्या कस्तो हुन्छ ?
तिम्रो आँखाजस्तै हुन्छ ।
हाम्रो आँखा कस्तो हुन्छ ?
जून ताराजस्तै हुन्छ ।
यस्ता उत्कृष्ट कविता रचना गर्ने कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीका सम्बन्धमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे भन्नुहुन्छ – ‘क्षेत्रप्रतापका गीतहरुमा प्राकृतिक परिवेश र स्थानीय समुदायको जीवनशैली झल्किन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय जीवनको महिमागान, प्रेम, विरह, देशभक्ति, स्वभिमानलगायत विषयमा उहाँ गीत लेख्नुहुन्थ्यो ।’
वास्तवमा क्षेत्रप्रताप अधिकारी नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने कवि हुनुहुन्छ । उहाँले देशभक्तिका सुन्दर गीतहरु रचना गर्नुभएको छ । उहाँलाई ‘गामबेँसीका कवि’ पनि भनिन्छ । उहाँका रचना सरल, सुन्दर र मार्मिक छन् ।
वि.सं. २०७० साल चैत ३० गते हामीबाट सदाका लागि बिदा भएर जानुभएका आदरणीय कवि अधिकारीको पहिलो रचना ‘जानुभयो देवकोटा कवि नेपालीलाई टुहुरो पारेर ...’ हो । यो गीत उहाँले वि.सं. २०१६ मा महाकवि देवकोटाको निधन भएको बखत रचना गर्नुभएको थियो । उहाँको पहिलो प्रकाशित कृति ‘रहर लागेर’ हो । यो कविता र गीत संग्रहको रुपमा वि.सं. २०२४ सालमा प्रकाशित भएको थियो । कवि तथा गीतकारका रुपमा स्थापित कवि अधिकारीको चर्चित कृति ‘गामबेँसीका गीत’ २०३४ सालमा प्रकाशित भएको थियो । उहाँको यस कृतिलाई सबैले मन पराए ।
‘म त लालीगुराँस भएछु’ भन्ने कवि अधिकारीका ‘चौतारीमा राजा भेटियो, चौतारीमा रानी भेटियो’, ‘मलाई छोडी मेरो छायाँ कतै झरेछ, तिमीसम्म आइपुग्दा साँझै परेछ’ जस्ता गीतहरु अत्यन्त लोकप्रिय छन् ।
भर्खरै प्रकाशित यी दुई बालकविताकृतिमा पनि कवि अधिकारीका सुन्दर बालकविताहरु छन् । यी कविताहरु हरेक बालबालिकाले पढ्न र सुन्न पाए भने उनीहरुको विचार निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
युवा पुस्ताको आशालाग्दो चित्रकार सोनाम तामाङको आकर्षक चित्रकलाले सजिएको यस कृतिको मूल्य रु. ९५ मात्र रहेको छ । रु १ सय ९० मा रंगीन साजसज्जामा प्रकाशित दुईवटा कृति नै किनेर पढ्न सकिने छ । प्रकाशक बुकआर्ट नेपालको सम्पर्क नम्बर ०१ ४६७२०७३ हो ।